Hospital isugu deyayso daah
Noocyo ka daahirane
Bukaanka iyo Maternity Xidho
Noocyada kala duwan ee Abuulahab, Retardancy
Hospital isugu deyayso daah waxaa looga baahan yahay in ay retardant olol (retardant dab aka ama gaabin sida FR ). Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah retardancy olol.
Retardancy olol Temparory ( TFR ) la hayo by daaweynta kiimikada post-leh tolmo wanaagsan, sidoo kale iyada oo ah retardant olol dib-daahan ama darsatid dhar galay xal kiimikada, kaas oo nuuga galay Albers, abuuraya caqabad u dhexeeya fiber iyo ololkii. Waa in dab dhar qabsado, kiimikada dalbatay inta lagu jiro geedi socodka daaweynta dhar ah waxaa firfircoonaan by kulaylka, keenaysay reaction kiimikada kaas oo u bakhtiiyaan ololkii ah. Si kastaba ha ahaatee, ugu kiimikada flameproofing yihiin biyo L iyo sidoo kale dhereggu doonaa nadiifinta qallalan. Retardancy The olol of TFR (retardant olol temparorily) dhar hidde u libdhi iska leh dhaqo.
Nooca labaad waxa loo yaqaan muuqo Fire Retardant (aka muuqo Abuulahab, Retardant, ama gaabin sida IFR ) ama joogto ah Fire Retardant (aka joogto ah Abuulahab, Retardant ama gaabin sida PFR ). IFR ama PFR dhar leh tolmo wanaagsan waxaa ka fiber retardant olol oo sidaas daraaddeed feature ka socdaa ee Meyeydaan ee dhar iyo ma dhimin by lagu dhaqdo.
Daah isugu deyayso The sahay LONGWAY dhar si joogto ah waa retardant olol ( PFR ), retardant olol aka muuqo ( IFR ). Waxaa la tijaabiyey sida ay BS 5867-2: 2008 caadiga ah Nooca C labadaba ka hor-dhaqashada iyo ka dib 50 wareegyada ee lagu dhaqo caadiga ah (sida waafaqsan BS EN ISO 10528: mashiinada Automatic (Nooca A) at 75 +/- 3 degC in saabuunta ECE la sodium perborate, ku dhicid qalalan).
waqti Post: Sep-17-2018
Cinwaankaaga: No.999 Xugongqiao Rd, Kunshan Huaqiao, Gobolka Jiangsu, Shiinaha.
Olol Standards Retardancy
Difaan loo isticmaalo inta badan meelaha caamka ah (oo ay ku jiraan isbitaalada, guryaha waayeelka, dugsiyada, kaniisadaha, Audi ...
Hospital isugu deyayso daah waxaa looga baahan yahay in ay retardant olol (retardant dab aka ama gaabin sida ...